Omenala Akwụkwọ, Omenala Akwụkwọ akpa, Igbe Akwụkwọ Omenala - SmartFortune
Omenala Akwụkwọ akpa
Omenala Akwụkwọ Box
SmartFortune Packaging Co. Ltd bụ onye na-ebipụta akwụkwọ na nkwakọ ngwaahịa nke China nke na-ahụ maka ịmịpụta ọtụtụ akwụkwọ ọdịnala, mbipụta ahaziri, akpa akwụkwọ akpa, wdg.
Factorylọ ọrụ anyị dị na DongGuan obodo, GuangDong Province, China; Ọ dị nso na HongKong, ShenZhen na GuangZhou, naanị ihe dị ka elekere 1 na ụgbọ ala.
Anyị nwere ihe dị ka ndị ọkachamara nwere ọrụ 360, ma na-erite uru nke ahụmịhe anyị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 25, anyị nwere ike ịnye ndị ahịa mgbanwe ngwọta na asọmpi ụlọ ọrụ asọmpi na nnyefe ọsọ ọsọ na ọnụ ụzọ.
Biko kpọtụrụ anyị maka inweta nkwupụta gị, anyị ga-azaghachi gị ozugbo enwere ike.
AKWUSKWỌ AKW .KWỌ
Omenala akwụkwọ igbe
omenala Sound toy akwụkwọ maka ụmụaka
ebipụta akwụkwọ agba?
hazie igbe mpịakọta kaadiboodu
mepụta igbe kaadiboodu na windo PVC
igbe onyinye onyinye apị apị ọnụ ahịa ahịa
mepụta igbe onyinye Chocolate
kraft akwụkwọ akpa N'ogbe
mepụta ụlọ ọrụ na-emepụta ihe eji emepụta akwụkwọ
Anyị isi uru
Zọpụta gị na-eri na anyị ihe karịrị 25 afọ ahụmahụ na-ebi akwụkwọ na nkwakọ ụlọ ọrụ.
Fast azịza gị ase -Ọ bụrụ na ị chọrọ, nwere ike ịbụ 24 awa online gị.
Nye enyemaka maka imepụta ihe osise gị nke akwụkwọ ọdịnala gị, igbe ahaziri iche na akpa akpa.
QC na-achịkwa ọ bụla mgbe ị na-emepụta oke maka ezi mma
Izute ụbọchị achọrọ ngwa ngwa ọ bụrụ na ndị ahịa chọrọ
Nzaghachi ọsọ ọsọ maka ajụjụ ma ọ bụ nsogbu ma ọ bụrụ na ọ bụla
Ngwugwu ngwugwu nwere ihe nkwakọ ngwaahịa dị iche iche
Containers or packing, na decorating arụmọrụ maka ibu. Nkwakọ ngwaahịa bụ ihe na-aga n'ihu nke usoro mmepụta nke ngwaahịa na usoro mgbasa, ọ bụkwa ọnọdụ dị mkpa maka ngwaahịa iji banye na mgbasa na oriri. Ọrụ nke nkwakọ ngwaahịa nwere ihe ndị a ...
Kedu iwu China iji kwado mmepe siri ike nke ụlọ ọrụ nbipute na nkwakọ ngwaahịa?
Kedu iwu China iji kwado mmepe siri ike nke ụlọ ọrụ nbipute na nkwakọ ngwaahịa? Dị ka akwụkwọ obibi akwụkwọ na nkwakọ ụlọ ọrụ nwere ikike dịtụ ike ịmịkọrọ ọrụ, yana ogo mmetọ gburugburu ebe obibi dị obere, ndị gọọmentị mba na mpaghara nwere st ...
Kedụ ihe ị maara gbasara ụkpụrụ nchekwa gburugburu ebe obibi maka ibipụta akwụkwọ ụmụaka?
China'smụaka China na-ebi akwụkwọ ahịa akwụkwọ na-abawanye ọfụma ka ndị nne na nna na-etinyekwu uche na ịgụ akwụkwọ yana ọtụtụ ndị nne na nna na-etinyekarị uche n'ịgụ ihe Oge ọ bụla a na-akwalite ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, data ahịa nke akwụkwọ ụmụaka na-adịkarị ịtụnanya. Na ...
Kedu ikike dị na ahịa akwụkwọ ụmụaka nwere?
-Site na SmartFortune Sina Education weputara "Akwụkwọ 2017 White White na Oriri Ọzụzụ Ezinaụlọ China" (nke a na-akpọzi "White Paper") ụbọchị ole na ole gara aga. Akwụkwọ a bụ "White Paper" gosiri na oke oriri oriri n'ụlọ na-aga n'ihu ...
Copyright - 2012-2023: All Rights echekwabara.